Myanmar Defence Weapons: Mil Mi-17 အလတ်စား သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ရဟတ်ယာဉ်မျိုးကွဲများ
taughttun September 2, 2013 at 6:14 AM
သိပ်မကြာခင် ချင်းပြည်နယ် နဲ့ဝေးလံ ပြီး တည်ရခက်တဲ့ နေရာတွေ က ဆက်သွယ်ရေး တိုင်တွေ စိုက်ဖို့ဒီ ရဟတ်ယာဉ်ကြီးတွေ အသုံးတော် ခံအုံးမှာ မြင်ရောင်ပါသေးတယ်....
မစဉ်းစားတတ်တောင် ဆိုဗွီယက်ပြည်ထောင်စု ကြီး ဘယ်လို သုံးသွားတယ် ကြည့်ရင် ဘက်ပေါင်းစုံ အသုံး ချဖို့တော်တော် အသုံး ဝင်နေစဲ အကောင်ကြီးတွေ ဘဲ ဗျ
phoe saturday September 2, 2013 at 9:26 AM
မဂ်လာပါ ကို MM ။
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာရှိတဲ့ Mi 35 တွေနဲ့ Apache AH 64 ဘယ်ဟာကပိုကောင်းလည်းနှိုင်းယှဉ်ချက်ကလေးသိချင်ပါတယ်။
Mi 35 တွေမှာကိုယ်ပိုင် anti air defenseးစနစ်တွေပါလားလည်းသိချင်ပါတယ်။
ကို MM အချိန်တွေဖြုန်းတီးရတာအားနာပါတယ်။အကျဉ်းချုံးလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
roger nge September 2, 2013 at 12:04 PM
ဖြစ် ရရင် အရမ်းကောင်းမယ်ဗျ။အရင်က တည်းကကျနော်တို့
Chat gyi September 2, 2013 at 9:50 PM
တိုက်ဂါးဖြစ်ဖြစ်; အပါချီဖြစ်ဖြစ်တိုက်ခိုက်ရေး ရဟတ်ယဉ် တွေဝယ်ယူသင့်ပါတယ်"
zaw linn September 6, 2013 at 11:19 PM
အခု လောလောဆယ် Mi-24 အစီး ၅၀ နဲ့ Mi-2 ၁၂စီး ၀ယ်လိုက်ပြီလို့ သိရတယ်။ ဘာလို့ SU-35 တွေ မ၀ယ်တာလဲ မသိဘူး။ ပြည်တွင်း အတွက် ရည်ရွယ်တာလား အသိဘူး။
Gaw Wun September 9, 2013 at 4:49 AM
Wiki မှာ အောက်ပါအတိုင်းရေးထားပါတယ်။
".....Myanmar is also in the process of buying Su 30 from Russia. During his recent visit to Naypyitaw, Russian Defence Minister agreed to supply at least 24 Su 30s to Myanmar Air Force. Myanmar Parliament has already passedadefence budget that allow 1.4 bn $ for buying new weapons and armaments......"
တကယ် ဟုတ်မဟုတ် မသိပါ။
phoe saturday September 9, 2013 at 9:49 AM
heinsaw htet October 27, 2013 at 2:15 PM
ကိုmmရေ mi အမျိုးအစားနဲ့ us ကApache ဘာတွေကွာခြားတာလဲ ဘယ်သူကပိုကောင်းတာလဲ